Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Oo 650 Askari Gudoonsiiyay Lacag Abaal Mari Ah | Berberatoday.com
Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Oo 650 Askari Gudoonsiiyay Lacag Abaal Mari Ah
Berbera(Berberatoday.com)-Taliye Fadal ayaa ciidamadiisa booliska ku amaanay sida wanagsan ee ay uga qayab qateen ilaalinta Nabad galyada
Iyadoo maalmihii u dambaysay ay ciidamada kala duwan ee somalilnad gaardi ka ciyaar ay ku marayeen Xerada Birjeex ee caasimada Somalilnad kuwaasi oo u sii Tabaabushaysanayaay u diyaar garaowga Xuska Maalinta 18 May.
Ciidanka Booliska somalilnad ayaa kaalinta kowaad ka galay gaardi ka ciyaarkaasi u socday ciidamada kala duwan ee somalilnad waxaana goob jog ka ahaa lacagtaasi la gudoonsiinaayay Wasiirka Arimaha Gudaha Somalilnad Cali Waran Cadde Iyo Wasiirka Cadaalada Axmed Cadare .
Taliyaha Ciidamada Booliska Somalilnad Sareeye Guudo Cabdilaahi Fadal Iimaan ayaa lacag abaal marin ah gudoonsiiyay 650 Askari oo ka tirsan Ciidamada Boliska Somalilnad kuwaas oo uu ku amaanay sida qiimaha leh ee ay uga qayb qaateen Gaardiska ay samaynayeen Ciidmada Somalilnad.
Taliye Fadal ayaa ciidamadiisa booliska ku amaanay sida wanagsan ee ay uga qayab qateen ilaalinta Nabad galyada iyo gaardi ciyaarkaba kaas oo ku sifeeyay kuwa waajibaadkooga qaran ka soo baxay.
Taliye Fadal Oo Hadlkiisa sii wata waxa uu xusay in ciidanka boliska somalilnad yihiin udub dhaxaadka nabad somalilnad waxaana uu ku tilmaamay geesiyaal naftooda u horayaala sidii ay dhamaan shacbiga Somaliland ugu daashadaashoon lahayeen Nabad Buuxda .